आयोजना सञ्चालनको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा बजेट खर्च कमजोर भयो - Karobar National Economic Daily
आयोजना सञ्चालनको मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा बजेट खर्च कमजोर भयो
query_builderJuly 2, 2017 8:43 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility507
डा. शान्तराज सुवेदीअर्थसचिव
२०४९ सालमा हुलाक सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी यतिबेला अर्थसचिवका रूपमा कार्यरत छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने खुबी भएका सुवेदीले यसै वर्ष करिब ८२ हजार निजामती कर्मचारीलाई पछि पार्दै उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा पुरस्कृत भए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका सचिव सुवेदी यतिबेला सरकारले पहिलो पटक ल्याएको संघीय बजेट र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नीति–नियमको तर्जुमामा व्यस्त छन् । विशेष गरी ठूला आयोजनाको सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नहँुदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउने उनी चालू आवमा गरिएका प्रयासले आगामी आवमा उल्लेख्य सुधार हुने दाबी गर्छन् ।
७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्यसहितको बजेट कार्यान्वयन जटिल रहेको तर बजेट खर्च भएमा उक्त लक्ष्य पूरा हुने उनको विश्वास छ । राजस्व प्रणालीमा सुधार आए पनि करका दायरा विस्तार गर्न सकेमा पर्याप्त स्रोत जुटाउन सकिने बताउने सुवेदी सम्भावित मुख्य सचिवका रूपमा पनि हेरिएका छन् ।
उनै सुवेदीसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गरेको नीतिगत प्रयास र संघीयता कार्यान्वयन, बजेटले लिएको राजस्वको लक्ष्य र ७.२ को आर्थिक वृद्धिमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी ः
अर्थ मन्त्रालय यतिबेला के गर्दैै छ ?
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा पेस गरिसकेको छ । हामी बजेटमा छलफल भई स्वीकृत हुने प्रतीक्षामा छौं । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक तीनवटा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका छन् ।
यी विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भई आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जाने भएकाले अति महŒवपूर्र्ण ऐनहरू स्वीकृत हुन् भन्ने अभियानमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ । त्यसका अतिरिक्त आगामी आव सुरु हुनासाथ बजेट कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा हामीले पठाइसकेका छौं ।
त्यो मार्गदर्शनमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका आयोजना तर्जुमाको विषय, ठेक्कापट्टाको विषय, मुआब्जा, जग्गाप्राप्तिको विषयलगायत योजना तर्जुमाका सम्पूर्ण काम सम्भव भएसम्म साउनभन्दा अगाडि नै गर्नुस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।
यतिबेला बजेट कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी बजेट कार्यान्वयन र यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेकाले पुँजीगत खर्च बढाउन थप प्रयास गर्ने विषयमै अहिले अर्थ मन्त्रालय केन्द्रित छ ।
नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार हँुदै गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पनि नयाँ आउनुभएको छ । उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयको सबै कुराका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने काम पनि छलफल भइरहेको छ ।
चालू आवमा पुँजीगत खर्च बढाउन तपार्इंहरूले निकै प्रयास गर्नुभयो, तर पनि खर्चको अवस्था उस्तै देखियो । खर्च हुन नसक्नुको प्राविधिक कारणचाहिँ के रहेछ ?
नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आयोजना तर्जुमा गर्नुुअघि आयोजनाका चरणहरू पूरा हुन नसक्नु नै हो । ठूला र मध्यम आयोजनालाई अगाडि बढाउनुअघि आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको डिजाइन पहिले नै बनाउनुपर्छ र आयोजनाको ठेक्कापट्टा समयमै लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो विषय मुआब्जालगायतका विषयको सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कतिपय अवस्थामा आयोजना राख्ने तर त्यसका लागि पर्याप्त रकम नराख्ने परिपाटीले आयोजना समयमा सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।
यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफूलाई प्राप्त भएको रकम समयमा निकासा नगर्ने, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने र अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि नै अख्तियारी पठाए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमा तल्लो तहमा अख्तियारी नपठाउने अवस्था छ, जसले गर्दा तल्लो तहमा समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुने, ठेक्कापट्टा नलाग्ने अवस्था छ ।
स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहका लाभग्राहीले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय अवस्थामा अवरोध गर्ने, विभिन्न किसिमका माग राख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई समस्या देखाएर बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठेरो अवस्था भएको देखियो ।
आयोजना सञ्चालनको स्पष्ट मापदण्ड नहु“दा पनि विकास खर्चमा समस्या भनिन्छ नि ?
यस विषयमा निकै अन्योल देखिन्छ । ठूला राष्ट्रिय आयोजना घोषणा गर्ने तर कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषय नै तय हुन नसक्ने समस्या छ । उदाहरणका लागि, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बनाउने भनियो र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको छ तर त्यसलाई कुन मोडालिटीमा अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।
नेपाल सरकार आफैंले बनाउने कि वैदेशिक सहायतामा कुनै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउन दिने कि के मोडालिटीमा जाने भन्ने अझै अन्योल छ । फास्टट्र्याक ठूलो आयोजना भर्खर नेपाली सेनामार्फत बनाउने निर्णय भयो ।
यसअघि कुन रूपमा कसरी बनाउने भन्ने मोडालिटी तय भइसकेको थिएन । पश्चिमसेती आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नराखे पनि अहिलेसम्म मोडालिटी तय भएको छैन । यस्ता कारणले गर्दा बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नहुने, कतिपय अवस्थामा दातृ निकायले सहयोग गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर विभिन्न कारणले बीचमा गएर सहयोग गर्ने संस्थाले हात झिक्ने अवस्था पनि छ ।
उदाहरणका लागि हुलाकी राजमार्गमा त्यस्तै समस्या छ । यीबाहेक पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समयमै शोधभर्ना नमाग्ने कार्यक्रमहरू समयमा तर्जुमा नगर्ने, पालना गर्नुपर्ने ऐन–कानुनका परिधिहरू समयमा नगर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमअनुसार काम गर्न खोज्दा केही जटिलता पनि अगाडि आउनेलगायतका समस्याले पुँजीगत खर्च बढाउन बाधा पु¥याएको देखिएको छ ।
अझै त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा के भने ठेक्का लाग्ने तर समयमा काम सम्पन्न नहुने, कामको गुणस्तर कमजोर हुने तथा समयमा काम नगर्दा लागत बढ्ने, लागतअनुसार विनियोजन गरिएको रकमले नपुग्नेलगायत ठेकेदारले बीचैमा छाडेर भाग्ने जस्ता कतिपय अवस्था देखिएको छ ।
त्यसको समयमा कारबाही अघि बढाउने आयोजना प्रमुखले ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकाले यसले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन, आयोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको अवस्था देखिएको छ ।
स्थानीय तहले समयमा त्यो ठेक्का नलगाइदिने, निश्चित ठाउँभन्दा बाहिरबाट निकाल्न नपाइने, त्यसको आपूर्ति असहज हुने अनि जंगल, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावमा समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका चरणहरू समाप्त नहुनेलगायतका तमाम कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न समस्या देखिएको छ ।
यी समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले के–कस्ता प्रयास गर्दै छ ?
चालू आवको बजेट खर्च गराउन अर्थ मन्त्रालयले महŒवपूर्ण तथा गौरवका आयोजनाहरू, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका स्रोत सुनिश्चितता दिएका र सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, थप निकासा दिने काम पनि गरिरहेको छ ।
रकमको अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखेर रकम खर्च गर्न नहुने आयोजनाबाट बजेट फिर्ता सरेन्डर गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च बढाउन जुन रूपमा अभियान चालिएको थियो त्योअनुसार अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमनको पाटो पनि अगाडि बढाएको छ ।
ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, तिनको भौतिक प्रगतिको अवस्था र वित्तीय प्रगतिको अवस्था जस्तो कि भौतिक प्रगति भएको तर वित्तीय प्रगति नभएकोमा सम्बन्धित मन्त्रालयले किन निकासा गरेनन् ? किन भुक्तानी भएन ? समस्या के प¥यो भन्ने विषयमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं ।
यहाँले अनुगमन गरिरहेका छौं भनिरहँदा अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन फितलो भयो, आफ्नो दायित्व पूरा गरेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लिएको अनुगमनको पाटोमा कुनै कमी छैन । अर्थ मन्त्रालय स्वयंले मात्रै अनुगमन गरेर पनि पुग्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय तीनै निकायको संयुक्त अनुगमन टोलीले पनि पटक–पटक अनुगमन गरिरहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट ठूला आयोजनाको अनुुगमन भएको छ ।
हाम्रो अनुगमन महाशाखाले पनि २५ करोडभन्दा माथिका सबै आयोजनाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनबाट देखिएका अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या हामीले सम्बोधन गरेका छौं । अरू सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूबाट ती समस्या पहल गर्न निर्देशन पनि भएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन १० बुँदे निर्देशन पनि हामीले जारी गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै कसरत बाँकी छैन । अनुगमनको पाटो महŒवपूर्ण हो । त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।
विषयगत मन्त्रालयले अनुगमनलाई अपेक्षित रूपमा अघि बढाएको अवस्था देखिएन । भूकम्पप्रभापित जिल्लामा अनुगमनको अवस्था अत्यन्तै न्यून छ । पीडितहरूले पाउने अनुदान समयमै पाउन सकेनन् ।
यस विषयमा छलफल भयो, हाम्रो वितरण प्रणालीमा समस्या आएकाले समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । त्यस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले समयमै घचघच्याएको छ, तर पनि हामीले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनांै ।
चालू आवमा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सरकार असफल देखियो, राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यो आर्थिक वर्षमा राजस्वको कुल लक्ष्य ५ सय ६६ अर्ब राखेका थियौं । जेठ मसान्तसम्म संकलन गर्ने लक्ष्य ४ सय ९४ अर्ब थियो र जेठ मसान्तसम्म ५ सय २७ अर्ब संकलन भएको छ । संकलनका दृष्टिले गत वर्षको तुलनामा अत्यन्त बढी छ ।
३३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, लक्ष्यको तुलनामा पनि बढी नै संकलन भएको छ । यसले राजस्व संकलन राम्रो देखाउँछ । यो आर्थिक वर्षमा हामीले संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेका थियांै । मध्यावधि समीक्षाले ५ सय ८२ अर्ब संकलन हुन्छ भन्ने लक्ष्य थियो । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा हामीले ५ सय ९६ अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने संशोधित लक्ष्य राखेका छौं ।
यसअनुसारको संकलन हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । किनभने ५ सय २७ अर्ब संकलन भइसकेको छ । यसमा भन्सारको संकलन चैतभन्दा अगाडि राम्रो छ । त्यसपछि क्रमशः कम हुँदै गएको छ, आयात केही घट्दै गएको छ, सवारी साधनको आयातमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले केही अप्ठ्यारो बनाएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन आशातीत छैन, तर पनि लक्ष्यको तुलनामा जेठसम्म मूल्य अभिवृद्धिकर १ सय ४८ अर्ब ८४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ सय ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो करिब ९८.५ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा वृद्धिदर अत्यन्तै राम्रो छ । ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै अन्तःशुल्क पनि लक्ष्यको तुलनामा राम्रो छ । १ सय ८ प्रतिशत उठेको छ । आयकरको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ ।
आयकर जेठसम्म १ सय अर्ब उठ्नुपर्नेमा १ सय २० अर्ब उठेको छ । कमजोर भनेको भ्याट हो । भन्सारमा पछिल्लो चरणमा केही कमजोरी देखिएको छ । त्यस्तै गैरकर राजस्वको संकलन पछिल्लो चरणमा बढ्दै गएको छ । समग्र राजस्व प्रशासनमा गरिएको सुधार संकलनमा गरिएका प्रयासलगायतले राजस्व संकलन अत्यन्त सकारात्मक छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि लिएको राजस्वको लक्ष्य महŒवाकांक्षी भयो भनिन्छ छ नि ?
चालू आवको राजस्वको असुलीलाई आधार मानेर हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ३० संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो संकलनका लागि राजस्वका नीतिहरू तय गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयनमा सक्रियताका साथ लागेका छौं । त्यसैले महŒवाकांक्षी लक्ष्य भनिए पनि त्यो लक्ष्य सहजै पूरा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।
हाम्रो कर प्रणाली एकदमै झन्झटिलो छ भनिन्छ । करदाताले कर तिरेर पनि अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि केही मेकानिजम बन्दै छ ?
नेपालको कर प्रणाली आधुनिक प्रणालीमै आधारित छ । यसमा धेरै सुधार भएको छ । सबै अनलाइन सिस्टममा आइसकेको छ । नेपालका करसँग सम्बन्धित कानुन आधुनिक छन् । कतिपय अवस्थामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हाम्रा करका दरहरू साधारण छन्, कम पनि छन् । तर पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ ।
आयकर ऐन, २०५८ लाई आईएमएफले नै उदाहरणीय आयकर ऐन मानेर अघि बढाएको थियो, त्यो अहिले कार्यान्वयनमा छ । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागिसकेपछि सम्पूर्ण करको क्षेत्र र दायरा पनि विस्तार हँुदै गएको छ ।
भन्सारमा आधुनिकीकरण हुँदै गएको छ । भन्सारका दरहरू अत्यन्त न्यून बनाएका छौं । अन्तःशुल्क केही वस्तुमा मात्रै सीमित हँुदै गएको छ र शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा करजस्ता नयाँ किसिमका कर थोरै मात्रामा लगाइएको छ । यी सबैले गर्दा कर प्रणालीमा सुधार भएको छ, तर पनि स्वयं कर निर्धारण प्रणाली अपनाएको हुनाले करदाताहरू इमानदार हुनुहुन्छ, आफूले गरेको कारोबारअनुसारको सम्पूर्ण कर तिर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ । सबै करको दायरामा आउन नसकेको अवस्था छ ।
सरकारको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेकाले ठूलो मात्रामा करदाताको संख्या त्यो दायराबाट बाहिर रहने हुनाले उहाँहरूको छानबिन हुन सकेको अवस्था छैन, तर पनि कर छलीका घटनाहरू कर छलीका सूचनाका आधारमा छानबिन हुने, कर निर्धारण हुने र कर छलीबाट कोही पनि उन्मुक्ति हुन नपाउने किसिमले काम अगाडि बढेको छ । करको दायरामा आउनुपर्ने क्षेत्र अझै पनि ठूलो छ ।
सहरबजारमा काम गर्ने कतिपय व्यवसायीहरू पनि करको दायरामा आउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने दायित्व अझै छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याटमा अझै पनि करदाता आउन नसकेको अवस्था छ ।
तर पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त हामी भ्याटमा कमजोर भयांै नि ?
भ्याटका करदाता नै करको दायरामा आउन केही बाँकी छ । भ्याटमा दर्ता भएको कारदाताको कानुनको परिपालना, जस्तो कि समयमै विवरण बुझाउने, समयमै रकम तिर्ने, समयमा आफ्नो सम्पूर्ण हिसाब–किताब राख्नेलगायतका विषयमा हेर्दा भ्याटको कार्यसम्पादनमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । दर्ता भएका करदातामध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा करको कारोबार गरेको हुन सक्ने तर विवरण नबुझाउने देखिएको छ ।
त्यसले कतै धेरै कारोबार गर्ने करदाताले पैसा नबुझाई बसेका छन् कि भन्ने छ । दर्ता भएका झन्डै ३० प्रतिशत करदाताले विवरण नियमित बुझाउने तर शून्य कारोबार गरेको देखाउने अवस्था छ । यो गम्भीर छ । १५ प्रतिशत करदाताले डेभिट कर बुझाउने गरेको देखिएको छ त्यस्तै ५० प्रतिशत करदाताले क्रेडिट विवरण बुझाउने गरेको देखिन्छ । यसले कस्तो देखायो भने भ्याटलाई करको मुख्य स्रोतका रूपमा ल्याइएको थियो ।
चारवटा करलाई प्रतिस्थापन गरेर करको दायरा पनि बढाउँछ भनिएको थियो, तर कर कानुनको परिपालना गर्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा स्वयं करमा विश्वास नगरेकाले कतै कारोबार गरेको करदाताले पनि कर तिरेका छैनन कि, गर्नेले शून्य विवरण बुझाएका छन् कि, यसमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । अनुगमनको बाटो अझै बाँकी छ ।
यो समस्यालाई अहिलेकोे राजस्व नीतिले समेट्न सक्छ ?
अहिलेको राजस्व नीतिले करको दायरा विस्तार गर्ने, कर कानुनको परिपालनामा अभिवृद्धि गराउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैअनुरूप हाम्रो करको पालना गर्ने मुख्य प्रशासन यन्त्र राजस्व विभाग, राजस्व चुहावटमा सक्रिय राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभाग स्वयंले भन्सार विभागको मूल्यांकन हो, यसलाई व्यवस्थित गरेर वास्तविक कारोबारमा आधारित मूल्यांकन घोषणा सही गर्ने भनेर अगाडि बढेको छ । अनुगमनको माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्रिय भएर अघि बढेका छौं ।
विकास खर्च हुन नसक्दा पनि चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक भयो, यसलाई बचाइराख्न के गर्नुपर्ला ?
आर्थिक वृद्धि आर्थिक समृद्धिको आधार हो । देशमा आर्थिक गतिविधि सकारात्मक हुँदै गयो । लगानीको वातावरणमा बन्दै गयो । निजी क्षेत्रले लगानी बढाउँदै गए । सरकारको खर्च बढ्दै गयो भने वैदेशिक लगानी पनि बढ्दै गयो ।
यीलगायतका काम हुँदै गए भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सेवाक्षेत्रको रोजगारी बढ्दै जान्छ । सबै लगानी बढ्दा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने हो । चालू आवको वृद्धिको लक्ष्यलाई आधार मानेरै आगामी आवका लागि सरकारले पुनर्निर्माणमा १ सय ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै सडकको क्षेत्रमा ९० अर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्नलाई प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत्का क्षेत्रमा ६२ अर्बभन्दा बढी रकम लगानीको प्रस्ताव गरेको छ । २ सय २५ अर्ब रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यी सबैले आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् । आर्थिक गतिविधि बढ्नु भनेको लगानी पनि बढ्नु हो ।
रोजगारी पनि बढ्नुु हो । सरकारले यति लगानी गर्दा यसको दोब्बरभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रबाट हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अन्ततः सबैको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने हो, चालू आवमा देखिएको ६.९४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधार अत्यन्तै ठूलो देखिन्छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि लिएको ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कसरी सम्भव छ ?
सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीलगायतका विकास–निर्माणका कामलाई दिएको तीव्रता गतिशीलताका आधारमा आगामी आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कतिपय अवस्थामा कृषि उत्पादनमा मौसमले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी पनि बढाएका छौं । सिँचाइको व्यवस्था पर्याप्त मात्रामा छ । कृषिका कारणले पनि केही भूमिका खेल्छ । औद्योगिक वातावरणमा केही सहज हँुदै गएको पनि छ ।
लोडसेडिङको न्यूनीकरण र ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि पनि सामान्य अवस्थामा भएको छ, जसले औद्योगिक उत्पादन राम्रो हुन्छ, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउन नसके पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएर व्यापारघाटा पनि क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । यी सबै अवस्थाले आगामी आवको आर्थिक वृद्धि सहज रूपमा हासिल हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सक्यो र त्यहीअनुसार निजी लगानी आयो सहज रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
क्रियाकलापमा भर पर्छ, ठूलो लगानी सेवाक्षेत्रमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । औद्योगिक वातावरणमा, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको छ । रोजगारी बढेको छ, आम्दानी बढेको छ, खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । यी सबैले आर्थिक वृद्धिमै योगदान गर्ने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर सहज रूपमा हासिल हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौं ।
केही दिनदेखि राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने भनेर छलफल गर्नुभएको थियो, के भइरहेको छ ?
त्यो विगतका वर्षहरूमा यस्तो थिएन । गत वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा केही बचत भएको हो । सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च नभएका कारणले पनि बचत भएको हो । राजस्व संकलन राम्रो हुने र खर्चमा केही कमी भएको अवस्थामा राज्यको ढुकुटीमा केही रकम देखिएको हो ।
जति रकम देखिएको छ त्यो सबै बचत हुने पनि होइन । यो सरकारको स्रोत हो । कहाँ लगानी गर्ने भन्नेभन्दा पहिले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य छलफल भएको छ । विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ । यो विषय महŒवपूर्ण हो तर टुंगोमा पुगेको छैन ।
राजस्व बजेट संघीयता अर्थसचिव अर्थ